Siyaasiga Nuur Ismaaciil” Heshiiska Dakada Barbara Sameyntiisa ayuu leeyahay “” – Allpuntlander.com
Madaxweynaha Maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jawaabay hadal dhowaan ka soo yeeray Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo sharci daro ku tilmaamay heshiiskii dekeda Berbera.
Biixi ayaa ku tilmaamay Raisul Wasaare Khayre wiil yar oo Xamar ka taliya kaasoo uu sheegay inuu ku dhawaaqay dagaal, ka Maamul ahaana ay diyaar u yihiin inay iska difaacaan.
Wuxuu sheegay Madaxweynaha Somaliland in Dowladda Federaalka qaabka ay wax u wado aysan ku qanacsaneyn haddii ay yihiin Somaliland, wuxuuna tilmaamay Dekeda Berbera ay go’aan ka gaari karto Somaliland.
“Heshiiska dekeda wuu jirayaa, wuuna shaqeynayaa dekeda Berbera waxaa leh Somaliland, mana jirto cid aan marti uga noqoneyno” ayuu Biixi.
Madaxwayne Biixi ayaa hadalkan ka sheegay xaflad lagu maamuusayey xuska maalinta Haweenka Adduunka ee 8-da Maarso oo lagu qabtay magaalada Hargeysa.
Raisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa heshiiskii Dekeda Berbera ee dhexmaray Somaliland, DP-World iyo Itoobiya ku tilmaamay mid sharci daro ah oo aan waxba ka jirin, isagoo xusay in heshiis walba oo la galayo kuna saabsan Deked, Bad Kheyraad iyo kuwo kale inay u idman tahay Dowladda Federaalka Somalia oo kaliya.
Wararka Maanta, Wararka Puntland, Waraysiyo
Radio journalist arrested in Galkio
May 24, 2018 admin1 0
Dagaal Xoogan ayaa maanta ka Socda Deganka tukaraq Kaasi oo u dhaxeeya Ciidmada Maamulka Somaliland iyo...
Dagaal saaka hiraabtii hore ka qarxay degaanka Tukaraq ee gobolka Sool oo u dhexeeya ciidamada Puntland...
Dagaalo Xoogan ayaa Dhawaanahan ka dhacay Deganka Tukaraq Halkaas oo ay ku dagalamayeen Ciidamada Maamulka Somaliland...